Abalimi abaphumelelayo ekulimeni ingqoloyi bazaphiwa ama 99-year leases | uMthunywa
Abalimi abaphumelelayo ekulimeni ingqoloyi bazaphiwa ama 99-year leases
13 Jun, 2019 - 00:06 2019-06-12T22:04:37+00:00 2019-06-13T00:03:19+00:00 0 Views
UHULUMENDE uselungele ukunikeza abalimi asebetshengisele ukuphumelela kwezokulima ingqoloyi ama 99-year leases.
Ekhuluma esepulazini le-Wanu eGweru ngesikhathi ehlola isilimo sengqoloyi kulindawo uMphathintambo obona ngezoMhlabathi, Ezokulima, Amanzi, Ezomkhathi kanye lezokuhlaliswa kutsha kwabantu emaphandleni, u-Air Chief Marshal (Rtd) Perrance Shiri uthe uHulumende uzahlela ukuthi abalimi abaphumelelayo kwezokulima ingqoloyi baphiwe ama 99-year leases ukuze kube lesiqinisekiso sokuthi umhlabathi usetshenziswa ngokupheleleyo.
UMphathintambo Shiri uthe uhamba ehlola isimo sesilimo sengqoloyi elizweni lonke jikelele, wengezelele wathi uHulumende kasoze akhekheleze ukwehlisa isilinganiso somhlabathi walabo abangawusebenziyo.
Umaneja wepulazi leli uMnumzana Clever Matutu ukhalaze kuHulumende ukuthi azame ukuthi abalimi bengqoloyi bangacitshelwa amagetsi ngoba lokhu kuphambanisa ukulinywa kwalesi silimo okungabalakho ukwehlisa isivuno esikhangelelwe ngabalimi.
Izilimo zifuna umhlabathi owakhekileyo28 May, 2020
Vikelani izimvu kumathumba28 May, 2020